dia an-tserasera filokana tsy ara-dalàna any washington fanjakana
dia an-tserasera filokana tsy ara-dalàna in uk
Ny voampanga mpandraharaha avy any macau, ny 'anarana sy mahamenatra' ny tranonkala ny filokana izay meloka taminay no namoy ny antso ' ny sazy an-tranomaizina noho ny fanitsakitsahana ny angona fiarovana lalàna dia an-tserasera filokana tsy ara-dalàna ao virginia.
Choi (sary) nanamafy Ponto Farany izay, rehefa avy nifanakalo hevitra tamin'ny torohevitra, dia te tapa-kevitra fa "tsy misy ny fanafody, fa mba hanaiky" ny didim-pitsarana. Choi no lohan'ny Makaô Lalao Vaovao Fikambanana, izay maneho ny sasany junket mpandraharaha, raha ny hafa junkets isan ' ny Makaô Fikambanana ny Lalao sy ny fialam-Boly Mpanohana dia an-tserasera filokana tsy ara-dalàna any washington fanjakana. Controversially, ny vohikala nilaza ny hanolotra 'bounties' ny olona izay zavatra nitarika ny famoriam-bola ireo filokana trosa.
Ny website dia niseho tamin'ny 2013, maneho ny anarana, ny sary sy ny hafa manokana info ' ny mpiloka, ao anatin'izany ny vola izy nitrosa ny junket mpandraharaha izay te fronted azy ireo bola ny gamble ao Makaô casino VIP efi-trano dia an-tserasera filokana tsy ara-dalàna in uk. Ny alakamisy teo, teny portiogey ny haino aman-jery Ponto Farany ao Makaô dia nitatitra fa any macau, ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany nandà ny antso nataon'i Charlie Choi Kei Ian, izay tsy voaheloka enim-bolana an-tranomaizina noho ny tsy hanala ny angon-drakitra manokana ny sasany 500 lazaina fa filokana deadbeats avy ny 'Tontolo Mahafinaritra' ny namany sary. Hahazo ny farany filokana vaovao avy any Calvin Ayre hamilton tora-pasika 2 silaka fanampiny maneran-slot toaster. Nandritra ny taona maro, na junket vondrona efa maika Makaô dalàna mba hamaha ny manana rafi-pitantanana manokana ny malaza hentitra ny angona fiarovana lalàna, mba hamorona lisitra mainty ny ratsy izay meloka taminay hamburg casino hamburg new york. Araka ny tatitra, nolavin'ny Fitsaràna Choi ny antso tamin'ny 12 jolay fa ny vaovao manana afa-tsy izao natao imasom-bahoaka hamilton tora-pasika 2 silaka fanampiny maneran-slot toaster amin'ny alokaloka mpisafidy. Fa ny governemanta hatramin'izao dia tsy manetsika.